Jubbaland oo faah-faahin ka bixisay howlgal ay ka furisay Jubbalada Hoose iyo Gedo | HalQaran.com
Home Wararka Maanta Jubbaland oo faah-faahin ka bixisay howlgal ay ka furisay Jubbalada Hoose iyo...
Jubbaland oo faah-faahin ka bixisay howlgal ay ka furisay Jubbalada Hoose iyo Gedo
Kismaayo (Halqaran.com) – Wasaaradda Amniga Dowlad Goboleedka Jubbaland ayaa faah-faahin waxaa ay ka bixisay Howlgallo ay Ciidamada Jubbaland ka sameeyeen deegaano ka tirsan gobollada Jubbada Hoose iyo Gedo.
Afhayeenka Wasaaradda Amniga Jubbaland Cabdinuur Ibraahim Xusseen ayaa sheegay in howlgallada ay Ciidamada sigaar ah uga sameeyeen deegaano hoostaga degmada Jamaame, sida Jadeecaaleey, Goraa, iyo Holaa, isla markaana ay la wareegeen,sidoo kalena ay dileen Saddex ka tirsan.
Sidoo kale, waxaa uu sheegay in howlgallada Ciidamadu ay ka fuliyeen deegaano hoostaga degmooyinka, Dooloow, Balad-Xaawo iyo Luuq gaar ahaan tuulooyinka Bohol Hareeri Tuur iyo Babaa, isla markaana, iyada oo aan wax dagaal ah ka dhicin ay Ciidamadu la wareegeen.
Ugu dambeyn, Afhayeenka Wasaaradda Amniga Jubbaland ayaa xusay in u jeedka howlgallada ay ahaayeen inay ka hortagaan Xubno ka tirsan Al-Shabaab oo doonayay inay lacago ka qaadaan dadka Shacbaka ah.
howlgal ka fuliyay
Jubbada Hoose iyo Gedo